Ividiyo enkulu yeAmazon yeApple TV inokumiliselwa ngo-Okthobha 26 | Ndisuka mac
Ukusukela uTim Cook uxele ngokusungulwa kweapp yeAmazon Prime Video yeApple TV ngoJuni ophelileyo kwinkomfa yonjiniyela, uninzi lube yimini yokukhutshwa ecwangcisiweyo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho namnye ozalisekisiweyo. Ekuqaleni bekufanele ukuba iboniswe nge-12 kaSeptemba, kunye ne-Apple TV 4k entsha, kodwa amahemuhemu aliqela ahambelana nophuhliso axele ukuba le app ayizukufika ngexesha.
Kungekudala emva koko, amarhe amatsha athi le app unokuza emva kwexesha ngoSeptemba ukuze kungqinelane nomdlalo weLwesine weNFLKuba iAmazon ifumene amalungelo awodwa ngeli xesha lonyaka. Kodwa hayi. Amarhe amva nje ahambelana nokuphuhliswa kwesi sicelo, athi ngo-Okthobha u-26 uya kuthi ekugqibeleni afikelele kwiVenkile yeApple.
Kucacile ukuba iAmazon ayingxami ukusungula esi sicelo, kuba kungenjalo, ngeyishukumisile izulu nomhlaba ukuze iboniswe ngaphakathi kwesakhelo sokubonisa iApple TV 4k entsha kunye ne-iPhone entsha. Umhla omtsha ocwangciselwe u-Okthobha i-26 upapashwe ngentambo yeRedit, apho Ngokomsebenzisi weAmazonVideoEngineer, isicelo sizakubetha iVenkile yeApple TV ngaphambi kokuphela kwenyanga, ngakumbi nge-26 ka-Okthobha.
Ukuthathela ingqalelo oku ikwanguloo msebenzisi wathi ekupheleni kuka-Agasti isicelo asizukulungela uSeptemba 12, mhlawumbi ngeli xesha, umhla omtsha uchanekile kwaye ukusukela nge-26 ka-Okthobha bonke abasebenzisi beAmazon Prime banokonwabela, ikhathalogu eyandayo yeethotho kunye neemovie (nangona ukuya kwinqanaba elincinci) leAmazon Prime Video.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » Ividiyo enkulu yeAmazon yeApple TV inokukhutshwa ngo-Okthobha u-26
UClaudio Dreppelmann sitsho
Makhe sibone ukuba ngaba namhlanje ngumhla. Ngo-19 emva kwemini kufuneka sazi ngokuqinisekileyo.
Phendula uClaudio Dreppelmann
Ewe, kwakhona, kubonakala ngathi akukho nto kwaphela. Okwangoku kuya kufuneka silinde ukubona ukuba iAmazon Prime App ifika nini kwiApple TV.